Posted by ကြည်ကြည် at 7:34 AM
khin oo may December 15, 2011 at 7:46 AM
မိုးယံ December 15, 2011 at 8:22 AM
အခု သီတင်းကြေငြာတဲ့ စတိုင်လ်မိုက်သဗျ.
အေးလေ...ဟိုနေ့က တွေ့တာပဲ..လှနေသေးတာကို....တစ်ချို့တွေက မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ အညီ နှိပ်ချနေသေးးးးးးးးး
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) December 15, 2011 at 2:10 PM
ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် ...း)
အပြုံးပန်း December 15, 2011 at 2:27 PM
အဲဒါမြန်မာပြည်ပေါ့၊ နွေးထွေးမူလေးများ မရဘူးလား။
san htun December 15, 2011 at 2:48 PM
မမကြည်ကြည် မတွေ့ တာကြပြီဗျို့ ..အရင်လို လှမြဲ လှနေပါတယ်..ညာနဲ့ ...
မဒမ်ကိုး December 15, 2011 at 4:39 PM
အောင်မလေး ၀မ်းသာလိုက်တာ ငါ့အမ ဘလလေးပြန်အသက်ဝင်လာပြီ နေ့တိုင်းမမဘလော့ကိုကြည့်ပြီး ဘယ်တော့များမှပြန်ဖွင့်ပါ့မလဲလို့တွေးနေတာ
မိုက်တယ် ကြိ်ုက်တယ် ..
မ၀လဲ ငါ့အမကအမြဲလှပြီးသား ဒိုးကန်ကချစ်ပြီးသား
MG THANT December 16, 2011 at 1:42 AM
မမကွန် ကောမက်ဖတ်ပြီး ရင်ထဲတမျိုး ဖြစ်သွားသေးတယ် :P
မြန်မာပြည်မှာ မီးမပျက်ခင် သတင်းကြော်ငြာခြင်း...
Anonymous December 16, 2011 at 2:18 AM
Everybody commented all before what i want to say.Same,same,same .......:P
ပြန်လာရင် တွေ့မယ် ဒါပဲ
ကျော်နှင်းဆီလွင် December 17, 2011 at 12:04 AM
ရန်ကုန်ကအကြောင်းတွေဖတ်ပြီး ပြုံးလဲပြုံး လွမ်းလဲလွမ်းမိတယ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 17, 2011 at 9:30 AM
ဒါကြောင့် ပျောက်နေတယ် မှတ်တာ...
မွန်မွန်ယိုကို December 18, 2011 at 8:45 AM
ဒါဆို မွန်မွန်တို.နဲ.တူတူပဲ။ယောက်ျားက ဘွဲ.ယူပီးချက်ချင်းပြန်တော.တာပဲ။
မှန်တယ် မကြည်ကြည် ။ဖေ.ဘွတ်လေးတောင် မနည်းဖွင်.ရတာ။ ခုကိုယ်.ဘလော.ပြန်အသက်သွင်းမလို.အရင် အားယူတဲ.အနေနဲ.ဘလော.လည်နေတုန်း။ဟ ဟ ဘဝတူတစ်ယောက်တွေ.သွားပီ။ စာတွေဆက်ရေးပါဦးနော်။ waiting.....
အားလုံး အားလုံး ..
ဟောဒီက ကြည်ကြည်လေးကို မမေ့သေးလို့ ကျေးဇူး( ဇတ်ထဲကလေသံအတိုင်းပြောလိုက်သည်)
An Asian Tour Operator December 19, 2011 at 11:36 PM
An Asian Tour Operator December 19, 2011 at 11:38 PM
ရှာသေးတယ်။ ပြန်သွား တယ်ပြောလို့။ ဘာလီလာတုန်းက မတွေ့ဖြစ်ပေမယ့် တိုကျိုမှာ တွေ့ဖြစ်မယ် ထင်နေတာ။
ခုတိုကျိုမှာလား .. ပြန်သွားတယ်ဆိုပေမယ့် ပန်ပန်က ခဏခဏ ရောက်ဖြစ်တယ် စိတ်မပူနဲ့